Maitiro Ekuodha - ASFO Chitoro
Kunyoresa hakudiwi, asi kunokupa zvakanakira zvakanakira!
Wana mukana wekupa kune akakosha ekupa pamwe nekushambadzira: Iwe uchagamuchira makoponi, zvinopihwa, zvidzikiso uye dzakawanda nhau muako akanyoreswa email!
Tenga nekukurumidza: Ingo zadza fomu redu rehukama kamwe uye ruzivo rwako runozoiswa ipapo kana uchitenga mune ramangwana.
Nhoroondo yekuraira: Unogona kugara uchitarisa zvaunotenga.
Kurongeka muzvikamu zvina zviri nyore:
1. Kunyoresa kana Login
Kana iwe uri mutengi mutsva, kuti utore mukana wakakwana wezvese webhusaiti zvinhu, iwe unofanirwa kunyoresa neruzivo rwako kana kushandisa yako Facebook account. Iwe unozoendeswa kune peji idzva kwaunofanirwa kuisa mune zvakadzama ruzivo rwako pachako (kero yakazara uye yakazara, nhamba yemutero kunyoresa, nhamba yefoni ...). Mushure mekuzadza iyo yese inodiwa minda, tinya pa "Chengetedza".
Kutevera maitiro aya, unogona kupinda webhusaiti nekuisa yako yakanyorwa email uye password.
2. Kutsvaga uye Kusarudza Chigadzirwa
Kuti uwane chigadzirwa chaunoda, unogona kuongorora Menyu Menyu kana kushandisa nzira yeku "Kurumidza Kutsvaga" kumusoro kwepage. Kuti utarise mamiriro echigadzirwa, tinya pazita rayo kana mufananidzo. Iwe unogona zvakare kushandisa "Featured Zvigadzirwa" uye "Specials" mamenyu kuwana zvigadzirwa zvinokufarira.
Mutengo unoratidzwa pane imwe neimwe chigadzirwa peji ndiyo yekupedzisira, kusanganisira inoshanda VAT (mari yekutumira haina kubatanidzwa uye inozowedzerwa mushure mekusarudza nzira yekutumira).
3. Ngoro yekutengera
Nekudzvanya "Tenga" pane chigadzirwa, izvi zvinobva zvawedzera kune yako "Shopping Cart", chinhu chinokubvumira kuchengetedza, kuwedzera uye kubvisa zvinhu, kurongedza huwandu hwechigadzirwa uye tarisa huwandu hwekupedzisira kukosha (mapepa ekutumira asina kubatanidzwa).
Kana iwe uchinge watonyoresa uye wapinda muruzivo neruzivo rwako, zviri mu "Shopping Cart" chako zvinogara zviripo nguva imwe neimwe paunowana webhusaiti uye kunyangwe kana uchivabvisa kana kuenderera kunobuda.
4. Ramba Uchienda Kunze
Paunenge uchida kuenda kunotarisa kunze kwezvinhu zvigadzirwa zvaunenge wawedzera ku "Shopping Cart" yako, tinya pane "Tenga" pakona yekurudyi yeji peji kana pane "Shopping Cart" peji.
Kana iwe usati iwe wagona kupinda mukati mushure mekudzvanya pane "Tenga", munda kuenda ku "Login" ichaonekwa pamusoro pe "Process to Checkout" peji. Muchiitiko kana usati wanyoresa webhusaiti yedu, iwe unogona kuenderera mberi nekutenga nenzira yakajairika, usingakanganwi kunyatsozadza zvakakwana munzvimbo dzose dzinodiwa kuti uise kodha yako.
Mushure mekutambira chikumbiro chako cheodha, tichakutumira email kuchisimbisa, pamwe nerondedzero yezvigadzirwa zvawakaraira.
Mune mhaka iwe uine chero mibvunzo, usazeza kuonana nevatinotsigira vatengi sevhisi kuburikidza neemail (contact@asfo.store) kana nekutaura (pakona yekurudyi yemapeji peji redu rewebsite).